घर दक्षिण अमेरिका फुटबल स्टोरीहरू सालोमन रन्डन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जसले सबैभन्दा राम्रो नामले उपनाम "Gladiator"। हाम्रो साल्मोमन रन्डन्स बचपन स्टोरी प्लस अनल्ट बाइबिलको तथ्याङ्क तपाइको बचपन बाट उल्लेखनीय घटनाहरु को पूर्ण खाताको लागी तथ्य। विश्लेषणमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धि भन्दा पहिले जीवन कथा, प्रसिद्धि कथा, सम्बन्ध र व्यक्तिगत जीवनमा वृद्धि गर्नका साथै समावेश छ।
हो, सबैले जान्दछन् कि त्यो कसैलाई हो जसले जो क्यारियर ढिलाइलाई सहन वा सहन सक्षम बनाउन सक्षम बनाउँछ, उनलाई सबैभन्दा ठूलो मर्निष्ट स्ट्राइकहरू मध्ये एक बनाइन्छ जसले प्राइम लीगलाई पाएको छ। तथापि, केवल केहि केहि सोलोमन रन्डमको जीवनी विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, चल्न सुरु गरौं।
जोसे सलमानोन रोमन गिनिज सित सितस्टर्स 16 को 1989th दिनमा उनको आमा, मट्याट जिमिनेज (एक गृहस्थ) र क्यारिया, जोसेफ राफेल रोन्डन (क्यामेरा शिक्षक शिक्षक) को क्यारिया, भेनेजुएला मा कैटिया को प्रचलित क्षेत्र मा जन्मिएको थियो। तल तल सामोन रन्डनका प्यारा आमाबाबुको तस्बिर हो।
सामोन रन्डमको आमाबाबु - मातृ-मट्याट जिमिनेज र फेथर-जोसे राफेल रोन्डोन (क्रेडिट IG)
सालोमन रन्डनको जन्म उनको पिताको अनुसार भविष्यवाणी गरिएको थियो जसले एक पटक आफ्नो छोराको पूर्व जन्म कथाको विवरण दिए।
"मेरी पत्नी, जब गर्भवती हुन्थ्यो त्यो धेरै ठूलो पेट थियो। त्यसबेला पनि मेरो बहिनीको प्रशंसा थियो डिएगो मराडोना किनभने 1986 विश्व कपको। यसले बाहिर जान्छ कि हामी हरेक खेल जहाँ एक खेल देख्यो Maradona खेलाडी सुलेमानले आफ्नी आमाको गर्भमा बढी लात हाल्नेछन्। यसको कारण, मेरी बहिनी भन्छिन् कि मेरो जेठो छोरो फुटबल खेलाडी हुने थियो र त्यो सही थियो। जोसे राफेल रोन्डनले सम्झना गरे।
राउन्डले अन्ततः आफ्नो मातृभाषा परिवारको परिवारमा आफ्नो आमाबाबुलाई दोस्रो छोराको रूपमा जन्मियो। उनले आफ्ना भाइहरू, गेरार्डोलाई तीन वर्षको वरिष्ठ र तिनका भाइ भाइ मात्र माई जो कि जेएनएमएक्सक्स वर्षको उनको जूनियर हो।
यसअघि, प्रारम्भिक क्यारियर
सालोमन रन्डनले हरेक रातको बिरुद्ध जीवन बिताउन थालेपछि चाँडै हिँड्ने, लात र सुत्न हर रात। यो फुटबलमा उनीहरूको सहभागिता थियो जसले उनलाई बच्चाको रूपमा बनाएको गरिब छनौटबाट टाढा टाढा टाढा।
"म जन्मेको हुनाले म सधै बल संग हिड्छु र सबै कुरालाई लात हाल्छु। चार वर्षको उमेरमा मैले मेरो स्कूलमा खेल्न थाले। "
4 को निविदा उमेरमा, रन्डमले आफ्ना मूर्तिहरू स्वीकार गरे Rivaldo र रोनाल्डो लुइस नाजियो डे लिमा.
विद्यालयमा फुटबल प्ले गर्ने निर्णय एक दिन आएपछि राउन्डका शिक्षकले आफ्नी आमा, मटानालाई स्कूलको गंदे अदालतमा फुटबल खेल्न अनुमति दिइसकेका थिए। उनले स्वीकार गरे र राउण्डले दिनको समयमा स्कूलमा फुटबल खेल्न थाले। उनको पहिलो खेलकुद सफलता उनको स्कूलको प्रतिस्पर्धात्मक खेलको दौडान आयो जहाँ उनले आफ्नो पहिलो ट्राफिक जिते।
रौतहट पहिलो स्पोर्टिङ सफलता - क्लब गलिमामा क्रेडिट
विद्यालयबाट फर्के पछि पनि फुटबल अझै पनि आवश्यकता थियो। यसले उनको स्थानीय युवती क्लब, सान जोसे डे क्यालासन मा नामांकन गरे जसले उनलाई शाम को फुटबल खेल्ने मौका दिए। रन्डनले अध्ययनको लागि पूरक गतिविधिको रूपमा फुटबल प्रयोग गरे, जुन सधै आफ्ना आमाबाबुको निरीक्षणको अधीनमा रहेको थियो जुन उनीहरूको छोराको शुरुआती फुटबल सम्झनाहरूको फोटो एल्बम राखिएको थियो।
सालोमन रन्डनका पिताले आफ्नो छोराको चाँडै कैरियर जीवनलाई एल्बममा क्रेडिट-क्र्रोनिकामा बताउँछन्।
यसअघि, सडकको प्रसिद्धि
स्लोमोनको लागि सल्मोमन रन्डनको जुनून पनि कहिलेकाहीँ पारिवारिक घरमा नकारात्मक लाग्यो। यो एक समय थियो रन्डम र तिनको भाइ गेरार्डोले आफ्नो घरको विन्डो, पाटन र भित्ताहरू तोडिदिए।
साल्मोमन रन्डनले आफ्नो घर विन्डोलाई एक फुटबलको रूपमा आफ्नो फुटबल बलमा (पिक्सेबेको क्रेडिट)
आफ्नो आमाबाबुबाट गम्भीर बोल्डिङ प्राप्त गर्दा राउण्डलाई उनको मामले नेतृत्व गर्यो जुन उनीहरूलाई चश्मेको लागि तिर्नुपर्ने बेलामा उसले एक पेशेवर फुटबलरको रूपमा पैसा कमाउन थाले।
ठूलो निर्णय गर्दै:
रोसनले क्यासस्ज उच्च विद्यालयको दोस्रो वर्षमा हुँदा सबैभन्दा ठूलो निर्णय गरे। उनले आफ्नो पिता राफेललाई आफूसँग रसायन विज्ञान शिक्षकसँग एक धेरै गम्भीर कुराकानीलाई सोचेका थिए।
"उनले मलाई बताए कि उनी स्कुलर खेल्न स्कूल छोडेर जाँदै थिए" तिनको बुबाले सम्झाउनुभयो।
सल्मोमन रन्डलले अन्ततः आफ्नो कलेज शिक्षा छोड्ने र आफूलाई पूर्ण रूपमा फुटबल गर्न अपरिहार्य निर्णय गरे। यस्तो निर्णय पछि उनको सफल परीक्षण पछि स्थानीय क्लब डिपोर्टो गिमामा को रोस्टरमा नामांकन गरिन्।
सालोमन रन्डल डिपार्टिवो गुलामा आइडी कार्ड (क्रिकेट गिलिमा को क्रेडिट)
Deportivo Gulima मा, सालोमन रन्डम युरोप मा आफ्नो आँखा थियो। उनको पछि लाग्न, उनले युरोपमा खेलाडीहरूलाई प्रोजेक्टको लागि प्रतिष्ठाको साथमा कोलगुआ क्लबमा अरागुआमा आफ्नो फुटबलिंग परिपक्वता प्रक्रिया जारी राख्न निर्णय गरे। रौन्डुले अरागुआमा क्लबको मिडियाको मुख्य विषय बन्न पुग्यो।
सालोमन रन्डनको रोड फेम (कम्प्लेआनासोडफोसोसोसको क्रेडिट)
सतत सफलताले उनलाई उनीहरूको जवान रैंकमा सामेल भएपछि एक वर्षको बखत क्लबको वरिष्ठ टोलीलाई बढायो। 17 को उमेर मा रन्डनले वेनेजुएला प्राइमरा डिवीसीन मा आफ्नो पहिलो स्थान बनायो। यसले कुनै समय लिन सकेन कि उनी आफ्नो देशमा सबैभन्दा राम्रो आक्रमणकारीको रुपमा लिइयो।
सालोमन रन्डलको सफलता कथा अगुगुआ संग (एएस को लागी क्रेडिट)
त्यस वर्ष 2008, रैंन्ड अप युरोप पछि खेल्न सपनाहरू एक वास्तविकता भए पछि यू डी ला पालमस स्पेनमा। घर छोड्ने त्यो भावनात्मक क्षणबारे बोल्दै, एक पटक रोन्डनले भने ...
"युरोपमा मेरो परिवार छोडेर सबैभन्दा ठूलो कुरा थियो। मेरो आमा मेरो अन्तिम शब्दहरू थियो 'जाओ!' मेरो माई रोइरहेका थिए जब उनले भन्यो। मैले पनि रोएँ। म उस समयमा 19 मात्र थियो। मलाई केही थाहा थिएन - मलाई थाहा छैन कि कसरी पकाउने ... म सधैँ स्काइप गर्दै थिएँ, 'माम, म पास्ता पकाउन कसरी सक्छु ?!' मेरो दादी जस्तो थियो, 'पानी प्यानमा राख्नुहोस् र ...!' "
युरोपमा, रोन्डनले प्रगति गर्यो र आफूलाई मलागा को लागी खेल्दै भेट्टायो। उनले क्लबसँग छाप बनाउन लामो समय लागेन। तपाईंलाई थाँहा थियो?… मालागा मा, एक उभरते एक युगल रविवार विस्थापित गोल्डिंग मिसिन Ruud van Nistelrooy उहाँलाई पछ्याउन र पछि तिनलाई सेवानिवृत्तिमा फर्काउन।
सालोमन रन्डलको उदयको प्रसिद्धि (TalkSports र 20Minutos लाई क्रेडिट)
साल्मोमन रउन्डन एक युगिंग रुड वान निस्टेल्रोयलाई पछाडि पछि नायक बने। उनको फारमको लागि धन्यवाद, उनले पूर्व वेनेजुएला फुटबलर द्वारा खेलाए लालिगा लक्ष्मीहरूको रेकर्ड पार गर्यो जुआन अरेगो। The "मलागाको मुक्तिदाता"उनले उसलाई भनिन्छ कि आफूलाई आफैं स्पेनी क्लब एस्केप रेजिलेशनलाई मद्दत गर्दछ।
साल्मोमन रन्डनको मालागाको मुक्तिदाता बनेको छ (लाई इन्स्टाग्राम)
सलोमन रन्डन को रोमान्स एक छ जो सार्वजनिक आँखा को जांच देखि बचछ किनकि उनको प्रेम जीवन नाटक रहित छ। सफल वेनेजुएलायन पछि, ग्लैमरस पत्नी र सुन्दर बच्चाहरू छन्।
सामोन रन्डमको पत्नी र बच्चाहरु (सलोमन रोन्डनको क्रेडिट इन्स्टाग्राम)
सालोमन रन्डनले नयाँ क्यासलमा लेखेको समयको रूपमा लिन्छ जुन उसको विश्वास हो "महान शहर"उनको परिवारको लागि। "मेरी श्रीमती, मेरो दुई छोराछोरी, मेरी आमाजी, मेरी श्रीमतीको दादी, मेरो नजिकै मेरो परिवार छ" Rondón भन्यो,
साल्मोमन रोन्डनको व्यक्तिगत जीवन जान्नको लागी तपाईंलाई तिनको पूर्ण चित्र प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ। सुरूवात बन्द, उहाँ कसैलाई जीवनको व्यावहारिक दृष्टिकोण भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि उसले सबै कुराभन्दा खुशीको खोजी गर्ने निर्णय गर्दछ।
पिचमा गोल गर्दै गोल गरेपछि, सामोमन रन्डमले बहुमूल्य समय प्रदर्शन गर्ने बक्सिङ कसरत खर्च गर्दछ जसमा उनीहरूले आफ्नो उच्च शरीरको बल बढाउँछन्। तल यस्तो workouts को एक भिडियो हो।
रोन्डनले आत्म-रक्षाको लागि खेलको रूपमा बक्सिङमा विश्वास गर्दछ। तल भिडियोमा, उसले बक्सिंगलाई राम्रो प्रयोगमा राख्न सक्षम पार्छ आफ्नो बच्चालाई कसरी आफूलाई रक्षा गर्ने र समस्या खोज्दै एक माध्यमको रूपमा खेल को प्रयोग गरेर।
आफ्नो बच्चाहरु र मुक्केबाजी संग खेल रहे स्टेज जेम्स पार्क देखि दूर, रोन्डन आफ्नो कुत्ते संग चलने मा खुशी लेता है।
सलोमन रन्डम र उनको कुकुर (आइतबारको क्रेडिट)।
आफ्नो देशको सबैभन्दा लोकप्रिय फुटबलर र एकमात्र प्रिमियर लीग प्रतिनिधिले निश्चित रूपमा सालोमन रन्डनको परिवार र सम्पूर्ण देशलाई उनीहरूको गर्व गर्दछन्। सालोमन रन्डलका आमाबाबु र भाइहरू क्यारकास, भेनेजुएलामा लेखिरहेका छन् जुन लेखनको समयमा। यो एक देश हो जुन आर्थिक रूपमा अस्थिर छ किनभने यो लामो समयसम्म चलिरहेको आर्थिक र राजनीतिक संकटको कारण हो।
सालोमन रन्डमको देश विफलतामा (एनबीसी समाचार र खलीफा)
मुद्रास्फीति नियन्त्रणबाट बाहिर जाँदै, हिंसक अपराध रक्सी र वेनेजुएला मा हत्या दर भयानक छ। अपहरणकर्ताहरूको जोखिमबारे बोल्दै, एकपटक रोन्डनले भने;
"धेरै थोरै व्यक्तिले मलाई मेरो परिवार कत्तिको थाहा छ र म यो यथार्थ कोसिस गर्दछु कि उनीहरुसंग मेरो देखिनै छैनन - सबै वेनेजुएला मा। यदि म तिनीहरूको साथ छु, यो सधैँ परिवारको घरमा छ। हामी ध्यान नदेऊन किनकि हामी सँगै बाहिर बसिरहेका छैनौ। म त्यहाँ त्यहाँ कुनै पनि ध्यान आकर्षित गर्न कोसिस गर्ने प्रयास गर्छु। "
सुरक्षा चिन्ताको बावजूद, रन्डन आफ्नो आमाबाबुसँग फोटो लिन शर्मीली छैन विशेष गरी उनको प्यारा पिता, जसलाई एक रसायन विज्ञान शिक्षकको रूपमा पछि भेनेजुएलाको सैन्य विद्यालयहरू मध्ये एकमा रसायन विज्ञान प्रोफेसर बने।
सालोमन रन्डलले आफ्नो बुबाको साथ आराम गर्दै (इन्स्टाग्रामको लागि क्रेडिट)
यसअघि, अनियमित तथ्यहरू
उहाँको ग्लेडिएटर उपनामको बारेमा:
यस अनुसार दर्पण, सालोमन रन्डल एक पल्ट प्रकट गर्दछ कि उनले आफ्नो उपनाम द्वारा बुलाया को आनंद ... "जनावर"मालागा मा आफ्नो समय को समयमा। न्यूकैसलमा सामेल हुँदा, फ्यानहरूले उसलाई बोलाए "Gladiator"जो एक नाम हो त्यो सबै भन्दा ज्यादा रुचि छ।
"मलाई उपनाम 'ग्लैडीटर' जस्तो लाग्छ। यो म पिचमा गर्ने प्रयास हो। म मेरा हातहरू खुल्यो, ठूलो देखिन्छ, मेरो शरीर बाटोमा लिनुहोस् र मेरो टोलीको लागि बल नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्नुहोस्। "
ग्लेडिएटर स्किल्स भिडियो अपलोड गरे पछि, रोन्डनले उनको प्रशंसकहरूलाई अनुरोधको लागि पुरस्कारको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरे कि उनीहरूको सर्वश्रेष्ठ फ्लिक्स र चालहरू ह्याटग्याग प्रयोग गरेर कुनै वस्तुसँग भिडियोहरू पठाउँछन्। #GladiatorSkillz # ग्यालडीडोर # ग्यालडिएटर। तल तल सामोन रन्डमको ग्लेडिएटर भिडियो हो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो सैलून रन्डन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
वेस्ट ब्रोमविच एलबियन फुटबल डायरी
फ्लोरियन थाउभिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य